Jamaica Waxay Soo Dhaweysay Duulimaadyo Cusub oo ka yimid German Airline Eurowings
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Jamaica Waxay Soo Dhaweysay Duulimaadyo Cusub oo ka yimid German Airline Eurowings
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Waxaa lagu qurxiyey calanka Jamaican, markabka saddexaad ee ugu weyn Yurub, Eurowings, ayaa duullimaadkeedii ugu horreeyay ka billaabay Frankfurt, Jarmalka, kuna sii jeedda Montego Bay ee St. James. Duulimaadka ayaa yimid fiidnimadii Noofambar 3, 2021, iyadoo ay la socdeen 211 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda.
Diyaarada saddexaad ee ugu weyn Yurub Eurowings, ayaa duullimaadkeedii ugu horreysay ka soo duushay magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka, kuna sii jeeday Montego Bay ee St. James shalay fiidkii.
Jarmalku wuxuu u ahaa suuq aad u xoogan Jamaica, iyadoo 23,000 ay soo booqdeen 2019 kahor masiibada.
Tani waxay sidoo kale ka caawin doontaa hadafka Jamaica ee ah in la kordhiyo soo-booqdayaasha ka imaanaya Yurub, oo lagu muujiyay awoodda kursiga diyaaradda ee u dhexeeya UK iyo Jamaica hadda 100% wixii ay ahayd kahor-COVID.
Jamaica waxay u furan tahay ganacsi waana meel nabdoon iyadoo heerka caabuqa COVID uu ku dhow yahay eber Waddada Resilient.
Dalxiiska Jamaica Wasiirka, Mudane. Edmund Bartlett, oo ku faraxsan warka jidkan dheeriga ah ee Jarmalka, ayaa sheegay in ay shaki la'aan xoojin doonto xiriirka jasiiradda ee suuqa Yurub.
"Jamaica runtii aad bay ugu faraxsanayd inay soo dhawaysay duulimaadkii ugu horeeyay ee ka yimid Eurowings shalay fiidkii. Jarmalku waxa uu noo ahaa suuq aad u xoog badan, iyadoo 23,000 oo booqasho ah oo dalkooda ka yimi ay yimaaddeen xeebaheenna 2019 ka hor masiibada. Waan ogahay in tiradani ay kordhin doonto duullimaadyada aan joogsiga lahayn ee hadda laga helayo Eurowings iyo Condor,” ayuu yidhi Bartlett.
"Duullimaadkan ka yimid Jarmalka ayaa sidoo kale gacan ka geysan doona hadafkayaga ah inaan kordhinno soo-booqdayaasha ka imaanaya Yurub, kuwaas oo kooxdaydu ay si firfircoon ula shaqeynayeen. Dhab ahaantii, awoodda kursiga diyaaradda ee u dhexeeya UK iyo Jamaica waa 100% wixii ay ahayd kahor-COVID. Waxaan rabnaa inaan u xaqiijino la-hawlgalayaashayada iyo kuwa mustaqbalka booqanaya jasiiradda taas Jamaica waxay u furan tahay ganacsi waana meel nabdoon oo leh heerka caabuqa COVID oo eber ku dhow yahay Waddada Resilient,” ayuu raaciyay.
Diyaaradda Eurowings Discover, oo ay saarnaayeen 211 rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaradda, ayaa markii ay soo degtay garoonka diyaaradaha ee Sangster International Airport (SIA) lagu soo dhaweeyay salaanta biyaha.
Rakaabka waxaa soo dhaweeyay ku xigeenka duqa magaalada Montego Bay, Councillor Richard Vernon; Safiirka Jarmalka u fadhiya Jamaica, Mudane Dr. Stefan Keil; Agaasimaha Fulinta ee Jamaica Vacations Ltd. Joy Roberts; iyo Agaasimaha Gobolka ee Guddiga Dalxiiska Jamaica, Odette Dyer.
Adeegga cusub wuxuu u duuli doonaa laba jeer todobaadkiiba Montego Bay, isagoo bixi doona Arbacada iyo Sabtida, wuxuuna kor u qaadi doonaa gelitaanka jasiiradda Yurub. Waxaa muhiim ah in la tilmaamo in Jamaica ay eegayso helitaanka 17 duullimaadyo aan joogsi lahayn toddobaadkiiba oo ka baxa Boqortooyada Ingiriiska. Intaa waxaa dheer, shirkadda safarka madadaalada ee Swiss, Edelweiss, ayaa bilowday duulimaadyo cusub todobaadkiiba hal mar gudaha Jamaica halka Condor Airlines ay dib u bilowday qiyaastii laba jeer duulimaadyo todobaadkiiba inta u dhaxaysa Frankfurt, Germany iyo Montego Bay bishii Luulyo.
Eurowings waa shirkadda Lufthansa Group ee duulimaadkeeda jaban iyo, sidaas oo kale, qayb ka mid ah kooxda duulista ee ugu weyn adduunka. Waxay ku shaqeeyaan 139 diyaaradood waxayna ku takhasusaan duulimaadyada tooska ah ee jaban ee Yurub.